Izinto okufanele uzibheke uma uthenga amakhamera we-IP
I-LS Vision - Umhlinzeki weKhamera we-IP anikeza izixazululo zohlelo lokuphepha kusukela ngo-2010.
Amakhamera we-Wifi ephansi we-WiFi Solar
Amakhamera we-Low 4G Solar Camera
I-CCTV DC12V 4G Solar Camera
Amakhamera we-Smart Home WiFi
Amakhamera webhethri we-WiFi
Amakhamera we-WiFi emnyango
I-WiFi Pan Tilt Camera
Ikhamera ye-2MP IP
Ikhamera ye-3MP IP
Ikhamera ye-5MP IP
Ikhamera ye-4K IP
Ikhamera ye-PTZ IP
4 isiteshi nvr
8 isiteshi nvr
16 isiteshi nvr
32 isiteshi nvr
64 isiteshi nvr
128 isiteshi nvr
Izinhlelo ze-Poe Security Camera
I-5MP poe nvr kits
I-Wifi Nvr engenantambo
2MPI WIFI NVR Kits
I-5MP WiFi NVR Kits
Uhlelo Lokulawula Ukutholwa Kwakhona
Amakhamera Wokulawula Ukufinyelela
Ukufinyelela kokutholwa kokutholwa kokutholwa kokutholwa
I-Thermal imager yokulinganisa lokushisa komzimba womuntu
Amakhamera we-Industrial Thermal Amakhamera
Uhlelo lokuphepha lwe-Smart
Amakhithi wokuqashelwa kobuso
Amakhamera wokuthwebula kobuso
Amakhamera wokuqashelwa kobuso
Ukuqashelwa kobuso be-NVR
Abantu babalwe amakhamera
Ikhamera yomzimba we-4G
Ikhamera yomzimba ejwayelekile
I-20x hight isivinini se-PTZ
I-10x Zoom Bullet Ptz
I-4x Zoom Bullet Ptz
Manje njengoba wazi umehluko phakathi kwekhamera ye-IP nekhamera yewebhu, ungenza isinqumo esinolwazi ukuthi ngabe yilokhu okudingayo ngempela. Uma ...
Manje njengoba wazi umehluko phakathi kweIkhamera ye-IP Futhi i-webcam, ungenza isinqumo esinolwazi ukuthi ngabe yilokhu okudingayo ngempela. Uma usemakethe yekhamera ye-IP, kunezinto ezimbalwa okufanele uzibheke kulo la madivayisi:
· Bheka isimo sakho sokukhanyisa. Uma ungenalo ukukhanya ku-24/7 nomaphi lapho ikhamera yakho izobhekana khona, uzodinga eyodwa ngombono wobusuku. Amakhamera we-IP amaningi we-IP anezinzwa ezibucayi ezibucayi kanye nezinhlaka ezikhipha infrared ezikhipha ama-Optics. Lokhu kuzobavumela ukuthi baqhubeke nokuqopha ebumnyameni ngokuphelele, bathola imisebe ebonisiwe ye-infrared kusuka ku-LED yabo.
· Lokhu akukho-bagnar, kepha ngisazoyisho: thola ikhamera ephakeme kunazo zonke ongayikhokhela.Ikhamera ye-720P IP kufanele kwanele, kepha i-1080p izohlala ithela kangcono. Ungatholi isinqumo esiphansi ngaphandle kokuthi wenza okuthile okufana nokubuka ingane yakho ngenkathi usesemsebenzini. Udinga isithombe esicacile uma kuzoke kusetshenziswe njengobufakazi.
· I-Pan Remote ne-ZOOM imisebenzi ihlala iyi-plus enkulu kakhulu!
Ukubukwa kwamakhamera angalawulwa ngedivayisi ephathekayo.
· Thola ikhamera ekwazi ukuxhumana ngo-802.11g noma n. Lokhu kuzoqinisekisa isithombe sekhrisithi. I- "G" ne- "n" ibhekisa ezinkotsheni ezingenantambo ezithinta ngqo i-bandwidth etholakalayo yokuhambisa. Ngemiphumela emihle kakhulu, sebenzisa 802.11n (Uzodinga futhi i-router engakwazi ukuxhumana nephrothokholi efanayo). Lokhu kuzokusindisa i-bandwidth eyanele nganoma yini enye owenzayo kwi-WiFi namanye amadivayisi wakho.
· Uma ikhamera yakho ingaphandle kwekhaya lakho noma ibhizinisi, thola okuthile okubufakazi.
Megapixel IP Camera isetshenziselwe ukubiza kakhulu futhi okuwukufaka okuwukufaka. Manje, baguquguqukayo kakhulu futhi elula. Vele wenze iphutha lokusebenzisa ikhamera yewebhu njengedivayisi yokubheka. Azenzelwe lelo njongo.
Ukuqala kwamakhamera we-IP kwenze kube lula kakhulu ukugcina ikhaya noma ibhizinisi liphephile. Lawa makhamera anomehluko omkhulu owenza banenzuzo kakhudlwana kule nhloso ethile kunokusebenzisa ama-webcam alula. Uma unemibuzo mayelanaAmakhamera we-HD IP, sicela uxhumane nathi ngqo.
PHAMBI Ungayikhetha Kanjani Ikhamera ye-IP
Yini ikhamera ye-IP? OLANDELAYO
I-copyright © 2021 Shenzhen Lsvision Technology Technology Co, Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.